Akhriso:Xog iftiiminaysa Xaalada dhabta ah ee dalka Syria. | Somaliland Mirror
Home WARARKA Akhriso:Xog iftiiminaysa Xaalada dhabta ah ee dalka Syria.
Akhriso:Xog iftiiminaysa Xaalada dhabta ah ee dalka Syria.
adminAug 10, 2020WARARKA0
Damascus ( Somaliland Mirror)- Wali Waxa Dalka Syria Ka socda dagaaladii. Taageerada Xoogga leh ee dalka Ruushku siinayo dawlada Bashar Al-Asad wali ma soo afjarin dagaaladii ama wali waddanka gacanta kuma wada dhigin. isbahaysiga uu dabada ka wado Maraykanku ama taageero waxa ay gacanta ku hayaan in ka badan 3 meelood meel. Turkiguna waxa uu gacanta ku haya Gobalka Edlib. Inta waxa dheer Maraykanka ayaa si buuxda ugu haya gacanta soo saarida iyo safaynta shidaalka dalka Syria. Halka Turkiguna ku dhawyahay inuu dhamaystiro samaynta maamulo ku xidhan ama ka amar qaata isaga gudaha dalka Syria.
Xaalada dalka Syria wali way qasantahay, deegaanka koonfur ka xiga Edlib wali waxa weerar joogta ah lagu haya fadhiisimada ciidanka militariga ee Syria ( Bashar Al-Asad) waxaana xoogaga hubaysan qorshaynayaan ama isku dayayaan in ay weeraraan garoon diyaarado oo muhiima.
Waxa kaloo isku dhacyo ka jiraan bariga wabiga Furaat, oo halkaas ay xoogaga kurdiyiinta ee Maraykanka gacan saarka la leh ay marba isku dhacaan , dhinacyo carbeed oo Turkiga ku xidhan iyo xita mararka qaar ciidanka Bashar Al-Asad.
Waxa dhawaan yaguna iclaamiyay jabhada Syria ee dimuqraadiga ee ismaamul hoosaadka kaga dhawaaqday waqooyi bari Syria, in ay shirkad Maraykan ah heshiis la galeen sida ay u horumariyaan sadex ceel oo shidaal iyo dhismaha warshad shidaalka lagu safeeyo oo lacag $150 million ku kacaya. arintaas oo macnaheedu yahay in Maraykanku qorshaynayo in uu wakhti badan sii joogi doono Syria.
Ruushka iyo dawlada Bashar Al-Asad ayaa kasoo horjeeda heshiisyadsn, laakin xaqiiqdu waxa weeyaan inayna waxba ka qaban karayn.
Islamarkaana waxa saamayn wayn dalka ku haya cunaqataynta Maraykanku kusoo rogay.
Previous PostGobolka Togdheer oo sannadkan kaalinta koobaad ka galay Imtixaanka Shahaadiga ah ee Dugsiyada Sare ee Somaliland. Next PostMahdi Guuleed Oo Ka Dhawaajiyay Arin Uu Madaxwayne Farmajo Ku Hawlanyahay.